China Non-Asbestos / Asbestos simenitra vita amin'ny roof vita amin'ny roof vita amin'ny mpanamboatra sy mpamatsy | Amulite
Ny famokarana takelaka vita amin'ny tafo vita amin'ny savony vita amin'ny simenitra dia namolavola lalina ary be mpampiasa mandritra ny 30 taona mahery. Avy amin'ny Hatchek sy ny tsipika fanamafisam-peo mihetsiketsika hatreto amin'ny tsangambato hatchek amin'izao fotoana izao dia navaozina tamin'ny fanavaozana 9 Times, ankehitriny ny tsipika famokarana takelaka vita amin'ny hazavana dia manana 10000Sq.m isan-15000Sq.m 、 20000Sq.m ho an'ny safidin'ny mpanjifa. Azontsika atao koa ny manamboatra ny fahaiza-manao mifanaraka amin'ny fangatahan'ny mpanjifa.
Ny takelaka vita amin'ny tafo vita amin'ny simenitra vita amin'ny fibre dia manana fisehoana miharihary amin'ny velarana manarona lehibe, afon'afo, fanoherana ny hamandoana, fanoherana ny harafesina, fanoherana hafanana, hazavana mavesatra sns, ary ny famokarana dingana dia tsotra. Vidiny ambany, ampiasaina be toy ny takelaka an-tampon-trano amin'ny karazana ozinina indostrialy, faritra fambolena, tranom-barotra. Trano fonenana, trano fitobiana. Ary trano vonjimaika sns.
Teknolojia famokarana takelaka vita amin'ny tafo vita amin'ny simenitra vita amin'ny fibre
Takelaka vita amin'ny tafo miendrika simenitra maka simenitra. Fibre asbestos. Fibre fitaratra. Kraft Paper Pulp, PVA Fiber Etc ho toy ny akora fototra, manampy vovoka vato na manidina lavenona. Taorian'ny fizotran'ny fampifangaroana slurry fitaovana mora. Miaraka amin'ny hatcheck Type Forming Sheets-tsipika mankany amin'ny takelaka. Aorian'ny fanamafisam-pefy hanamboarana takelaka mihombo farany; Avy amin'ny fahasamihafana amin'ny onja, mazàna izahay dia manao karazana takelaka tafo telo. Miantso azy ireo ho toy ny lambam-pandrefesana lehibe izahay, lambam-pandrefesana afovoany. Ary takelaka kely onja; Ho an'ny tsenan'ny firenena samihafa, misy ny tsy mitovy amin'ny famaritana ny onja, azontsika atao ny manamboatra milina takelaka mitafo vita amin'ny habe samihafa arakaraka ny fangatahan'ny tsenan'ny mpanjifa.
1. Slurry Storage And Mixing
Simenitra, Asbestos, Fibre fitaratra ary fitaovam-piadiana hafa dia namboarina tamin'ny alàlan'ny fampifangaroana Impeller ary nalefa tany amin'ireo takelaka niforona tamin'ny alàlan'ny fantsona.
Ny hamandoan'ny slurry amin'ny asbestos simenitra dia nesorin'ny fomba fanamoriana efijery gauze, ary ny fitaovana sisa tavela dia apetraka amin'ny sosona simenitra vita amin'ny Rubber Roller.
3. Vacuum nahatsapa mpikapoka
Fiber simenitra slurry sosona be loatra rano dia tsy fahampian-drano amin'ny alàlan'ny takelaka fanivanana vacuum, ny mpanasa mahatsiaro tena dia hanadio ireo maloto amin'ny fahatsapana, izay afaka manome antoka ny fahatsapana mihazakazaka amin'ny hafainganana hafainganana.
4. Milina Sheets mamorona milina
Eo ambanin'ny tsindry ataon'ny varingarin-tsolika sy ny fantsom-bozaka, ny sosona asbestos vita amin'ny simenitra dia mihodina miaraka amin'ny milina fanodinana, ary ny hatevin'ny takiana dia hokapohin'ny tariby vy manapaka.
5. Masinina mamorona vacuum mpamorona vovoka
Taorian'ny famolavolana takelaka vita amin'ny varingarina, ny fonosana vita amin'ny simenitra vita amin'ny fibre dia mampiseho amin'ny masinina mamorona vovoka amin'ny alàlan'ny fahazoana mpampita, rehefa vita ny haben'ny habe sy ny fanapahana, ny famoahana vacuum dia vita indray mandeha, ary ny fanavakavahana misoritra ho an'ny takelaka misy fotony sy ny modely mitafo.
6. Sehatra fanondranana hydraulic
Mifanaraka amin'ny Stacker amin'ny alàlan'ny maodely fanaraha-maso mandeha ho azy, (Fihetsiketsehana misaraka, fifamatorana, fiakarana sy fidinana, fametrahana), izy io dia manana ny mampiavaka ny tranon'omby sy
Fananganana marina, fametrahana toerana marina, entana be sns.
7. Masinina vita amin'ny taratasy
Shredder ary manamboatra ny taratasy fako amin'ny pulp taratasy, raiso ho toy ny akora ampiasaina ho an'ny famokarana takelaka vita amin'ny tafo mitafo;
Teo aloha: UV Coating / Drafitra famokarana sary hosodoko
Manaraka: EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line
Andalana famokarana birao maimaimpoana asbestos
Masinina fanamboarana birao simenitra tsy misy gazy
Tsipika famokarana simenitra tsy asbestos